လူတိုင်းခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ဦးတည်ကြ | Mizzima Myanmar News and Insight
လူတိုင်းခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ဦးတည်ကြ
ခုလှုပ်ရှားမှုဟာ ဗဟို ဦးခေါင်းဆိုတာ မရှိဘူး။ သိပ်ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို ကာကွယ်ကြ ဟု လူမှုကွန်ယက်တွင် ရေးထားသူက ဒေါက်တာညိုထွန်း။
ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဆန္ဒပြတော့ရဲကမေးတယ် ။ ဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲတဲ့ အဲဒီခေတ်က သခင်စိတ်ကို စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား မောင်ဘသောင်းက ဖြေတယ်။
ဒီမိုကရေစီကို လူတိုင်း ဦးဆောင်ကြပါလို့ Facebook မှာ ရေးထားသူက ဆရာ သင့်ဘဝ တင်မောင်သန်း။
သောင်းချီ သိန်းချီတဲ့ လူအုပ်တွေ လမ်းပေါ်စထွက်လာတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက် နှင့် ၇ ရက်နေ့တွင် တင်ထားကြသည့် ပိုစ့်များဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ ဒီအယူအဆတွေက ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း Open Society တည်ထောင်မှုတွင် အရေးကြီးသည့် အခြေခံ အယူအဆဖြစ်သည်။
(က) ခေါင်းဆောင်မျှော်မှုသည် သမိုင်းအစဉ်အလာ မွဲနုံချာမှုပင်
'ပုံမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များသည် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များ အစဉ်အလာများပေါ်တွင် အခြေခံသည်ဟု သိပ္ပံနည်းပဲ ကျသယောင်၊ ယင်းအတွေးအမြင်ယူဆချက်ပဲ မှန်သယောင် လူအများသည် ထင်မှတ်မှားကြသည်။ လူတို့ရဲ့ လူမှုဖြစ်စဉ်များနှင့် လူတို့၏ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနိုင်မှု ၊ ချင့်ချိန် မျှော်မြင်နိုင်စွမ်းကို လေယာဉ်အပေါ်မှ ရှပ်ကြည့်သလို ဖြစ်နေပြီး ယင်းအယူအဆမှာ လူတို့အား သူတပါးခြယ်လှယ်သမျှ လုပ်ရသူဟု ထင်မှတ်ပေသလော။ ထိုကဲ့သို့ သူများသည် Great Nation ကြီးမြတ်တဲ့တိုင်းပြည်၊ ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင် Great Leader ၊ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း လူ့အလွှာ ၊ အတွေးအမြင်ကောင်းတို့သည် အရေးကြီးသည်ဟု ထင်မှတ်မှားကြသည်။
ရာဇဝင်သမိုင်းအစဉ်အလာနှင့် ခေါင်းဆောင်မျှော်မှုတို့အပေါ်သာ တည်မှီခြင်းသည် သမိုင်းအစဉ်အလာအားဖြင့် မွဲနုံချာခြင်းဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ယင်းအယူအဆမှာ ရန်သူပင်။ ' ဟု ဆိုသူက ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း Open Societyအယူအဆကို ဖော်ထုတ်သူ ကားလ်ပေါ့ပါပင်။
ပလေတိုအယူအဆမှာ ခေတ်ဟောင်းအယူအဆဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ထောင်ရန် ဆန္ဒရှိသူများနှင့် မည်သို့မျှ မကိုက်ညီဟု သူက ထောက်ပြသည်။
" သူကပဲ ကျွနု်ပ်တို့ မူလအခြေအနေပြန်ရောက်အောင် ပြန်လည်ထူထောင်ပေးနိုင်မယ်။ နာဖျား မကျန်းမာဖြစ်နေတဲ့ ကျွနု်ပ်တို့ လူဘောင်ကို ပြန်ကုသပေးနိုင်မယ်။။ ပျော်ရွှင်မှု ကောင်းချီး မင်္ဂလာရဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။' ပလေတို
ပြီးပြည့်စုံသည့် တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မှုတွင် ပျော်ရွှင်မှုရှိစေရမယ်ဟု ပလေတိုက ဆိုပေမင့် သူ့ခေတ်သူ့အခါက ရှိရင်းစွဲမညီမျှမှုများ ၊ မင်းမျိုးမင်းနွယ်နှင့် အခွင့်ထူးခံများ နှင့် သာမန်ပြည်သူများအကြား အလွှာခြားစေမည့် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မှုနှင့် ဥပဒေလည်ပတ်မှုများအား မပြင်ဆင်ဘဲ ရှိရင်းစွဲ စနစ်ကနေ ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်မည်ဆိုသည့် အချက်ကြောင့်ပင် လူအများ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးကို မဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပေ။
Open Society အယူအဆ ဖခင် ကားလ်ပေါ့ပါကမူ လူ့အဖွဲ့အစည်းသဘာဝအရ တည်ရှိနေသည့် လူတန်းစားခွဲသည့် စနစ်များ ၊ လူ့အလွှာခြားစေသည့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လည်ပတ်မှုများအား ပြင်ဆင်ရန် မကြိုးပမ်းဘဲ ပျော်ရွှင်မှုရအောင်လုပ်ပေးမည်ဆိုသည့် ရီပတ်ဘလစ်ပါ ပလေတိုအယူအဆမှာ Closed Society အပိတ်လူ့ဘောင်အယူအဆ ပါနေသည်ဟု ထောက်ပြသည်။
အဆိုပါအပိတ် လူ့ဘောင်ကြောင့်ပင် လူမျိုးတူ ( သို့မဟုတ် ) လူအုပ်စု တစု အခြေပြု၍ ၄င်းတို့၏ စစ်မှန်သည့် အယူအဆ သဘောတရား တည်ရှိမှုကသာ နိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်နိုင်မည်၊ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရမည် ၄င်းတို့ကသာ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ထိုက်တန်သည်။ အခြားသူများ မစွမ်းဆောင်နိုင် မလုပ်နိုင်ဆိုသည့် အယူအဆမျိုး သဘောထားအမြင်နီးစပ်သည့် ထောက်ခံသူများ ဦးဆောင်နေသည့် စနစ်မျိုးလည်း အကျံူးဝင်ပါသည်။
(ခ) လူ့အလွှာခြားစေသည့် တည်ရှိလည်ပတ်မှုဆိုတာ
တကယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကပင် စစ်ဖိနပ်အောက် ပြန်မရောက်ရန် ဒီချုပ်အား မဲထည့်ဟု ဒီချုပ်ကပြောဆိုမဲဆွယ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုပင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။
ဒေါက်တာ ညိုထွန်းကတော့ " နန်းတော်ထဲဝင်ပေမယ့် နန်းတော်ထဲရှိနေသည့် အရံအတား ဆူးညှောင့်ခလုပ်များ ဖယ်ရန် မကြိုးပမ်းသည့်အတွက် ဆူးစူး၍ ရောဂါ အဆိပ်တက်ရခြင်းဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။ နတ်နေကိုင်းအချို့ ဘဝလည်း မေ့ကုန်သည်။
အိလိများအခွင့်ထူးခံအလွှာများလည်း ရှိသလို ၊ဗမာနှင့် ကျန်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအကြားတွင်ပါ အလွှာခြားစေသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဖြစ်နေသည်။
(ဂ) ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်း နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို ဦးတည်ကြရမည့် တိုက်ပွဲ
အမေရိကန် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်မှု အောင်မြင်ရေးတွင် အဓိကကျသည့် အချက်၂ ချက် ရှိသည်ဟု Daron Acemoglu က ဆိုသည်။
(၁) နိုင်ငံတည်ထောင်ကတည်းက ဥပဒေပြုရေးအပါအဝင် ဖက်ဒရယ် ပြည်နယ်များ၏အရေးပါမှုကို ဘေးဖယ်မထုတ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဗဟိုပါ၀ါမှာ တိုင်းပြည် လုံခြုံရေး ၊ ပြည်သူပြည်သားလွတ်လပ်ခွင့်တို့အတွက် အားကောင်းမောင်းသန် ဖြစ်နေခြင်း ( တနည်းအားဖြင့် အဆင့်ဆင့်သော အာဏာ အင်စတီကျူးရှင်းများ အားကောင်းကာ အာဏာ အလွှဲသုံးစားမှုများ မဖြစ်ရန်အပြန်အလှန်ထိန်းထေနိုင်ခြင်း)
(၂) လူထုကိုယ်တိုင်က စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်တို့အတွက် တန်းတူညီမျှမှုရလိုသည့် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြပြီး ယင်းကိစ္စများအတွက် လူထုစည်းရုံးမှုနှင့် နိုးကြားတက်ကြွမှု အားကောင်းကာ ဆိုးရွားတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်မခံလိုမှု
စသည့်အချက်တွေကြောင့်ဟု ၄င်း၏ The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လတ်တလော လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်ပါက နိုင်ငံရေးပါတီများသည် လူထုနောက်မြီှးဆွဲ အသွင်သာ ရှိနေသည်။လူထုကသာ အရာရာ ဦးဆောင်နေရသည်။
ဒီချုပ်ပါတီ ကိုယ်တိုင်ပင် နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုနှင့် မည်သည့် နိုင်ငံ ၊ မည်သည့်ပန်းတိုင်အတွက် တိုက်ပွဲဆိုသည့် နိုင်ငံရေးမက်ဆေ့ချ် ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ စု ၊လွှတ်၊ရွေးဆိုသည့် လက်တွေ့မကျ အများသဘောမဆန်သည့် ကြွေးကြော်သံကြွေးကြော်နေသည့် နီပေါလော်ဘီများလည်း ရှိနေသည်။
( ၁) စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး
(၂) ဖမ်းဆီးသူများ လွတ်ပေးရေး
တို့လောက်သာ ဘုံသဘော ခေါင်းစီးတပ်နိုင်သေးသည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင်မူ ၂၀၀၈ ခြေဥဖျက်ရေး၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ဖမ်းဆီးထာသူအားလုံး ပြန်လွှတ်ရေးကိုပါတောင်းဆိုနေသည်။
အမှန်တကယ်တော့ ဖမ်းဆီးသူများ ပြန်လွတ်ပြီး လက်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အလွှာခြားစေသည့် စနစ်များ အင်စတီကျူးရှင်းများ လည်ပတ်မှုကို ဖြစ်စေသည့် ဥပဒေများ ( အဓိကအားဖြင့် ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ ) ဆက်လက်တည်ရှိနေပါကလည်း ယခုကဲ့သို့ အာဏာသိမ်း အဆိုးကျော့သံသရာတွင် မကြာခဏဆိုသလို သက်ဆင်းနေကြဦးမည်။
သို့အတွက် ယခု လူထုနိုးထမှု ၊ နိုးကြားတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုသည် လစ်ဘရာဒီမိုကရေစီနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဦးတည်ရန် ဖြစ်သင့်သကဲ့သို့ နိုင်ငံထူးခြားချက်အရ တည်ရှိနေသည့် လူမျိုးစု ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုပါ ဦးတည်ရန်လိုသည်။ သို့မှသာ တိုင်းရင်းသားများလည်း ယခုလူထု လှုပ်ရှားမှုတွင် ပိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာပေလိမ့်မည်။
ယင်းသို့ ဆိုသည့်အတွက် စစ်တပ် လုံခြုံရေး ရဲတို့အား ရန်သတ္တရုတ်ပြုပြီး ဖြိုဖျက်ရန် မဟုတ်။
အာဏာရှင်၊ အခွင့်ထူးခံ စနစ်ကိုဖြိုဖျက်ရန် ၊ လူထု ဒီမိုကရေစီနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ရရန် ၊ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း
၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည့် တန်းတူညီမျှသည့် တိုင်းပြည်ကို တည်ထောင်ရန်သာ။
စစ်အာဏာရှင် စနစ် ပပျောက်ပါစေ !!!
မည့်သည့်အာဏာရှင်စနစ်နှင့် အခွင့်ထူးခံစနစ်မျှ မရှိစေရ !!!
မတရားမှုမှန်သမျှ ဆန့်ကျင်နိုင်ကြ ပါစေ!!!
ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ !!!
ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို တပါတည်း ဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေ!!!
လူထု လှုပ်ရှားမှု မအောင်မြင်ဆိုသည့် သမိုင်းအစဉ်အလာဆိုးကို ချေဖျက်နိုင်ပါစေ !!